S-Ergo 105 Yekutanga Ergonomic Wiricheya - Karman Healthcare
×	 802-DY - makumi matatu	1 × $185.00
View ngoro "802-DY - 30 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
Iyo Karman S-Ergo 105 Lightweight Wiricheya yakagadzirirwa S-Ergo yakasarudzika (yakangwara S-yakaumbwa ergonomic zvigaro) uye yakatanga zvinobudirira mumusika wepasi rose.
Pamusoro peiyo S-Ergo system, S-ergo 105 zvakare ine machubhu matsva akaumbwa-oval, ayo anogadzira kutaridzika kwakawanda uye anowedzera simba rechimiro. Iyi yakasarudzika modhi inoratidzira yakamisikidzwa tsoka, kubvumira kune kwakanyanya kuomarara kunzwa kana uchifambisa.
hapana sirivha Tsvuku
Orange inongowanikwa ye16 ″ uye 18 ″ Seat Sizes
S-ERGO 105 - 27 lbs huwandu
SKU: S-ERGO105 Categories: Ergonomic Wiricheya, Karma Mawiricheya, Ultra Lightweight Wiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Inorema chete 27 lbs. (w / zvigaro zvetsoka)
Yakagadziriswa armrest w / yakafara concave armpads
Yakagadziriswa Footrests ine Gumbo tambo ye Mhuru uye Heel rutsigiro
Backrest homwe yakasungirirwa kune iyo upholstery
7, X 1, Polyurethane pamberi caster
24 ”x 1 3/8 ″ matayara emahara emahara polyurethane, kukwira pakakwirira, akavhurika mahara mavhiri
Seat upamhi: 16, X17, kana 18, x17,
Grey Rakajeka 1/4 ″ Aegis Anti-Bacterial Cushions (muchina unogona kuwachika)
Fkuchembera backrest / yekupeta chigaro kuitira nyore kufamba
Chimiro Ruvara: Pearl Sirivha & Rose Dzvuku
Upholstery / Seat Chifuramabwe: Nhema inofema mesh chigaro uye kumashure AEIGIS®
Kurema Kugona kwe250 lbs
Kutumira Kukura 38.5, L x 31, H x 13, W
S-ERGO 105 - Ultralight wiricheya UPC #
S-Ergo105F18SS 661799290593 - 810058400512
S-Ergo105F18RS 661799290579 - 810058400529